bhimphoto: तिम्रो कवितामा के छ
Bhim Prasad Ghimire's blog
तिम्रो कवितामा के छ
एउटा समूह, जसका सबै सदस्य आफै सर्जक छन् । उनीहरू स्कुल-स्कुल पुग्छन् र, छक्क पर्छन् । मोतिराम राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानको नामबाट नेपाली भाषामा सिर्जनशीलताको खोजी गरिरहेकाहरू नवौं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा विद्यार्थीलाई विषय टिप्न सक्ने वरिष्ठ कवि भन्न रुचाउने भएका छन् ।
प्रतिष्ठान अध्यक्ष ज्योति जंगल भन्छिन् 'विषय टिप्ने क्षमता अचम्मको भेटिएको छ । जति कार्यक्रम चलाउँदै आयौ, त्यति नै हामीले पनि सिक्न पाएका छौ ।' फेरिएको समयसँगै स्कुलस्तरका बालबालिका अभिभावकका सोच र भोगाइलाई कवितामा उतार्न सक्ने भएको भान हुन्छ । उनी भन्छिन् 'धेरैलाई हाम्रो राजनीतिले प्रभाव पारेको भेटिन्छ ।' संविधानसभा, नया संविधान, सभासद, उनीहरूका चरित्र, संघीयताका मुद्दा, महँगी, दलका रवैया, मागपिच्छे चक्काजामका प्रवृतिले बालमनोविज्ञानमा पारेका असर कवितामा भेटिने उनले बताइन् ।
दलका सयौं नेता, एउटै कुर्सी तानातान
आफ्नो माग पुरा नभए ढुंगामुडा हानाहान ।।
(अविष दाहाल, कक्षा १०)
दुइ साताको फरक पार्दै विद्यालयलाई जानकारी गराएर चलाइएको विद्यालय कविता कार्यक्रमलाई 'भाषाको ज्ञान बढाउने माध्यम' मान्छन् कवि तथा गजलकार मधु पोखरेल । उनले भने 'हामीले स्थापितका रचनामात्रै सुन्नुपर्छ भन्ने होइन, यो अभियानले बालबालिकाका रुची, क्षमता र उनीहरूलाई असर पारेका प्रवृतिबारे सुक्ष्म रुपमा बुझने मौका जुटाएको छ ।' उनो भनाइमा कविता र गजलमा रुची राख्ने बाहेक पनि साहित्यबारे बुझन चाहनेलाई अभियानले समेटेको छ । भन्छन् 'नानीहरूका कवितामा छलछाम छैन, एकप्रकारको सोझो प्रस्तुतीले हामी कता जादैछौ र उनीहरू के सिक्दै रहेछन् भन्ने पनि देखाउँदो रहेछ ।'
धर्म ठान्छन् बिद्यार्थीले परीक्षामा चोर्ने
नदिएमा शिक्षकलाई उल्टै दागा धर्ने
अभिभावकसमेत आइ विद्यालय घेर्ने
किन फेल पार्‍यो भनी गुरुलाई नै केर्ने ।।
(अभिषेक काफ्ले, कक्षा ८)
प्रतिष्ठानसम्बद्ध कवि गण्डकीपुत्र भन्छन् 'बालबालिकाका कवितामा समय र प्रवृति भेटिँदो रहेछ । हामीले धेरै यस्ता प्रतिभाशाली बालबालिका भेटेका छौ, जसका प्रस्तुती कुनै मानेमा पोख्त सर्जकभन्दा कम छैनन् ।' विद्यालय कवितायात्राका श्रृंखलापिच्छे विद्यालयहरूको सकारात्मक प्रतिक्रियाले नवोदित सर्जक जुटाउन सकिरहेको उनले सुनाए । गद्य, पद्य वा लेखनका नियमको जानकारीका कुरा बिर्सने हो भने उमेरमा जो पनि एकपटक कवि बन्छ । विषयको बन्धन छैन । उनी भन्छन् 'तर, बालबालिकाका कुरा छुट्टै छन् । उनीहरू निष्कपट छन् ।' अभियानले मंगलवार विराटनगरको अर्कीड उच्चमाविमा नवौं श्रृंखला पुरा गर्दा राजनीति, प्रवृति र समसामयिकतामाथि व्यंग्य गरिएका कविता पुरस्कृत भएनन् । देश, राष्ट्रियता, अनाथका रहर र विद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमाथि गरिएका सिर्जनालाई हौस्याइयो । गण्डकीपुत्रले कारण यसरी प्रष्ट्याए 'विषय लेखन क्षमता र प्रस्तुतीको शिल्पलाई हामीले हौसला दिने हो । बालबालिकाका कविताको स्तरमा भाषा र त्यसका प्रस्तुतीमा मिलेका सिलसिलालाई हौसला दिए पो नेपाली भाषामा उनीहरूको दख्खल बढ्छ ।'
अभियान कसैद्वारा प्रयोजित छैन । अभियानकर्मी कोही पनि फुर्सदिला छैनन् । अभियानले आर्थिक फाइदा पनि दिएको छैन । तर, निरन्तरतामा बेलाबखत विराटनगरमा रहेका सिद्धहस्त सर्जकहरूलाई पनि जोडेको छ । साहित्यिक फाटमा नाम चलेका स्रष्टाहरू अभियानको निम्तो मान्दै निर्धारित विद्यालयमा पुग्छन् । बालबालिकाका कविता सुन्छन् अनि अतिथि कविका रुपमा आफ्ना सिर्जना उनीहरूलाई सुनाउछन् । अभियानकी सदस्य शुभलक्ष्मी लम्साल भन्छिन् 'हामी के लेख्छौ, नानीहरूलाई के सुनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने हामीले पनि थाहा पाउने अवसर भएको छ ।' अभियानमा सकभर नछुटाउने कवि खेम नेपाली भाषालाई बुझाउने र बुझने अवसर कार्यक्रमले जुटाएको ठान्छन् । उनले भने 'हामी भाषिक अतिक्रमणको चपेटमा छौ । न अंग्रेजी राम्रो छ नत नेपाली । कविता अभियानले कसेकम नेपाली भाषा जान्दा कोर्सकै लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने स्कुलका सरहरूलाई पनि बुझाएको छ ।
नवौ श्रृंखलामा निम्त्याइएका वरिष्ठ कवि कृष्णभुषण बलले पनि कविता सुनाए । उनले भने 'मलाई नानीहरूका सिर्जना सुन्न मज्जा लाग्छ । यस्तो मौका मिलिरहे सकेसम्म छुटाउँदिन ।' बिद्यालय कविता यात्राको क्रमका लागि तालिका छैन । छोटो सूचनामा भेला हुने सर्जकहरू फेरि अर्को श्रृंखलाका लागि जुटिसकेका छन् ।
(२०६८ पुस ९ कान्तिपुर कोसेली पूर्वाञ्चल संस्करण पानामा प्रकाशित)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:19 PM
content catagory साहित्य/विविध
Tweets by @bhimphoto
देश परिवेश (50)
जैविक विविधता (42)
तस्बिरभन्दा पछाडि (25)
यहाँ यस्तै छ (21)
यात्रा संस्मरण (14)
पाहुना कलम (4)
चलचित्र समीक्षा (2)
यहाँ के के छन् ?
'बुधियार छौडा आ राक्षस'
उतरार्द्धको एउटा अभियानकर्मी
अचम्मका 'भिलेन' बाबा
केही ब्लग झलक
Chembur West -
जातपातको भैँचालो र देश हुनुको अर्थ - १२ वैशाख २०७२ मा नेपाललाई ठूलो भूकम्पले हल्लायो । हजारौँ घरहरू भत्के, चानचुन १० हजार मानिसको ज्यान गयो । त्यो एउटा ठूलो विपत्ति थियो । तर, त्यसको जड जमिन...
मलाई बिहे मनपर्दैन - मलाई बिहे मनपर्दैन । मैले यो भन्दा खेरि संसार रिसाओस् मतलब भएन, मेरी श्रीमति रिसाउनु भएन । खासमा मलाई बिहे मन नपरेको हैन । मन नपरेको भए बिहे गर्ने नै थ...
आहा कति राम्रा फूल फूलेका - कोरोना भाइरसको कारण लामो लकडाउनमा बस्दा अब त बोर नै लागिसक्यो। घरै बसेर कम्प्युटरमा गर्ने काम त जति पनि छ। गरि पनि राखेकै छु। तर पनि मोनोटोनस भैरहेको छ। य...
२-३ ले जितेको युद्दको कथा - भाग १ - यी पुराना कथाहरु सम्झदा विरामीको ज्यान जोगाउन कति लडिएको थियो भन्ने याद आइरहेछ। विरामीको मृत्‍युमा डाक्टर र अस्पतालमाथी आक्रोशित भिड र...
सांसद फकाउन ह्यातका सञ्चालक फाइल बोकेर घरघरमा - *ह्यात होटलमा अनियमितता प्रकरणः* संसदीय समितिको निर्णय प्रभावित बनाउन अनेक चलखेल संसदीय समितिका छानबिनलाई प्रभावित बनाउनका लागि भित्र भित्र कतिसम्म चलखेल...
नयाँ क्यामेरा र सुविधा
यतिपल्ट हेरियो यो ब्लग
कसले कहाँबाट हेरे
नेपाल सम्बन्धी समान्यज्ञान
Media @ East Nepal
यो ब्लगमा खोज्नुस्
अप्डेटहरू इ-मेलमा पाउन
यो साता धेरै पढिएका
दु वइबाट मेरा एक मित्रले घरमा फोन गरेछन्, 'टेलिभजनमा मेरो साथीलाई देख्दा खुसी लाग्यो ।' संविधानसभा निर्वाचनको बेला थियो त्यो । मैले ...
Fishing Cat - माछा सिकारी
मान्छेको सम्पर्कबाट टाढै बस्ने यो जन्तु राति राति सिकारका लागि निस्कन्छ । यसका वास रहेका क्षेत्र र आनीबानीका विषय विस्तृत अध्ययन हुनै बाँ...
केही अघि एक दिन हिन्दी भाषाको एउटा साइटमा समाचार थियो 'अमिताभ बच्चनले धनुषलाई रुचाए ।' खबरको शिर्षकले जिज्ञासा बढाएन । धनुष भन्न...
एक्लै हुनुहुन्छ - देखाइदिऊ ?
जीमेल भनिने गुगलको इ-मेलमा अन्य कामसँगै छेवैमा 'च्याट' को अप्सन हुन्छ । यदि जीमेलबाटै इ-मेल चलाउन सिकेर विद्युतीय पत्र आदानप्रदान ...
त्यो आफ्नै बाटो गयो होला
हिजो बेलुकी सञ्चारकर्मी भाइ कमल रिमाल मसँग झर्किए । 'तपाइ डिसिजन दिन नसकने मान्छे' भन्दै । उनको गुनासो थियो त्यो लाटोकोसेरोलाई क...
त्यो दसैंमा कोइराला
पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका कोइराला सधै सञ्चारमाध्यमका लागि समाचारको केन्द्र बनिरहे । उनी बितेपछि उनीसँग जोडिएका सन्दर्भहरुका केस्रा केस्रा अ...
त्यो अन्तिम ' कमेन्ट '
इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा बीबीसी नेपाली सेवा रेडियोका नेपाल प्रमुख रविन्द्र मिश्र लेखिरहन्छन् । धेरैपल्ट उनका स्टाटसम...
फेशबुके र जीमेलको च्याटमा भेटिनेहरुको साझा प्रश्नको उत्तर फर्काउदा फर्काउदै अफलाइन बस्न मन लाग्छ । मलेशिया, कतार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मा...
बाँचेकै छन् उनीहरु
यो जीवन अल्झीदै जानेछ, व्यथाहरु बल्झीदै जानेछ भीडहरु भैकन यहाँ एक्लै एक्लै हिड्नेहरु, साथहरु भेटिदै जानेछ सपना पुरा हुनेछ । कलेज ...
लामा सफरमा निस्कदा धेरै परिवार आफुलाई चाहिने खान्की बोकेर हिडेका देखिनु नौलो छैन । यसका कारण छन् - आफुले लगेका खानेकुरा सफा र सन्तुलित हुन्छ...